Xiaomi Redmi Xusuusin 9 Pro, wanaag badan iyo cillado yar [Dib u eegis] | War gadget
Xiaomi Redmi Xusuusin 9 Pro, wanaag badan iyo cillado yar [Dib u eegis]
Baaxadda Xiaomi Redmi iyo inta soo hartay ee soo saaraha Shiinaha guud ahaan badeecadahooda waxay helayeen casriyeyn joogto ah bilihii la soo dhaafay, si la yaab leh buugga 'Xiaomi' wuxuu umuuqdaa inuu weji muhiim ah u yeeshay furitaanka, halkanna waxaan joognaa Androidsis si aan isugu dayno warkan oo aan marka hore kuu sheego. u dhiib khibradeena.
Markan waxaan haynaa 'Redmi Note 9 Pro', mid dhexdhexaad ah oo wanaagsan, raqiis ah oo raqiis ah oo leh cillado yar iyo wanaag badan. Nagala soo baar wixii aan aadka u jeclaan jirnay iyo waxa ugu yar ee aan ka jeclaannay milkiilaha dhexdhexaadka dhexe ee Xiaomi Redmi.
3 Muuji iyo waxyaabo badan oo warbaahin ah
5 Is-maamul iyo qaybo dheeri ah
Sida had iyo jeer ka dhacda Xiaomi's Redmi range, terminal-ka waa weyn yahay. Waxaan leenahay cabirro X x 165,7 76,6 8,8 mm wadarta culeyska 209 garaam, taas oo aan ahayn. ma xuma haddii aan xisaabta ku dareyno 6,67 inji oo ah shaashadeeda hore iyo batteriga weyn ee ay ku dhex jiraan. Ka fog wixii u muuqday inay dhacayaan dhowr sano ka hor oo leh xadka Redmi, Xusuusin 9 Pro wuxuu siinayaa dareen ah tayada degdegga ah ee gacanta. Xoogaa jir ah xagga hore, naqshad aad loo cusbooneysiiyey, dhisme quruxsan oo hufan
Cabirrada: X x 165,7 76,6 8,8 mm
Miisaanka: Gram 209
Halkan waxaad ka eegi kartaa Instagram-ka asxaabta Androidsis:
Waxaan tijaabineynaa Xiaomi Redmi Note 9 Pro waana runtii jecelahay. Halkan waxaa ah fiidiyow yar oo ka hadlaya feerka. # dib u eegis
Fariin ay wadaagaan Androidsis (@androidsisweb) ku yaal Jun 11, 2020 at 8: 29am PDT
Badhamadu waxay leeyihiin taabasho wanaagsan iyo waddo sax ah. Waxaan ka helnaa dhammaantood dhinaca midig, labadaba mugga midaysan, iyo badhanka "awoodda" ee hadda isku daraya akhristaha sawirka faraha taasna aniga ahaan, shaqsiyan, waxay umuuqataa bedel aad ugafiican akhristaha faraha ee dhabarka ay isticmaalayeen. Afar dareemayaal si cadaalad ah uga soo baxaya gadaal, aad udub dhexaad u ah waxayna siinayaan dareen xiiso leh wada noolaansho. Xaqiiqdii marka la eego naqshadeynta, wax yar oo laga doodo Redmi Note 9 Pro.
Ma jeceshahay Redmi Note 9 Pro? Waxaad ka iibsan kartaa HALKAN qiimaha ugu fiican.
Tusaale Redmi Notes 9 Pro
Xallinta HD buuxa +
Bogga hore ee degitaanka qeybta 84%
Qaabka shaashadda 20: 9
Gacaliye Qualcomm SnapDragon 720
Xusuusta RAM 6 GB
Kaydinta 64 GB
Afyare kaarka xusuusta Micro SD
Sawir qaade afar laab
Muraayadda ugu weyn 64 Mpx
Lens angle ballaadhan 8 Mpx
Sawirka Modro 2 Mpx
Muraayadaha indhaha 5 Mpx
Kaamerada iswada 16 Mpx
Batariga 5.020 Mah
Flash labalaab LED
Nidaamka hawlgalka Android 10 Q
Lakabka shakhsi ahaaneed MIUI 11
Cabbirada X x 76.7 165.7 8.8 mm
Xiriirinta wax iibsiga Xiaomi Redmi 9 Pro
Sidaan aragnay, tan Xiaomi Redmi Xusuusin 9 Pro ficil ahaan waxba kama dhinna.
Muuji iyo waxyaabo badan oo warbaahin ah
Waxaan ku bilaabaynaa shaashadda, halkaas oo aan ka helayno guddi 6,67 inches leh qaabab aan caadi ahayn laakiin aad u yar. Waxaan leenahay xalin FullHD + oo u dhiganta 2400 x 1080 pixels, taas oo aan fiicnayn marka la fiiriyo qiimaha, haa, oo leh saamiga 20: 9 aad u dheereeyay. Sida guddiga LCD, wuxuu leeyahay isdhexgal wanaagsan, markale Xiaomi sifiican ayey u shaqeysay markay hagaajineyso midabada, In kasta oo dhalaalkiisu aanu sarreeyn illaa laga ogaanayo, haddana in ka badan ayaa ku filan dibadda.
Dhinaca kale, waxaan ka helnaa hadhkii hiddaha ahaa ee hadda geesaha qaarkood iyo hareeraha "freckle" ee ay ku taal kamaradda. Xagga codka, waxaan ka helnaa waxa laga filan karo bartamaha, dhawaq ku filan marka loo eego mugga sare, laakiin aan ka dhex muuqan qaybaha intiisa kale, halka laga difaacayo, iyada oo aan dheeraad ahayn. Tani waa mid ka mid ah qeybaha inta badan laga jaro bartamaha, iyo 'Redmi Note 9 Pro' ma noqon doono mid ka reeban.
Waxaan tagnaa kamaradaha, halkaas oo aan ka helno afar dareemayaal taas waxaan faahfaahinta hoos ugu sii soconeynaa:
Qoto dheer 2MP
Shakhsiyan, waxaan hayaa labo dareemayaal oo haray, laakiin waa run inay bixiyaan kala duwanaansho xiiso leh. Midka ugu yar ee taagan waa qoto dheer, maxaa yeelay waa wax la ogaan karo in softiweerku leeyahay wax badan oo ku saabsan sawirrada qaabka "Portrait". Dhinaca kale, ka 64MP dareeraha ugu weyn, oo ku saabsan 64MP in aan la hawlgeliyay by default, tan iyo tallaalka caadiga ah waa ka dhaqso iyo fudud. Waxay si fiican u qabaneysaa waxyaabaha ku jira xaalad kasta oo iftiin ah, waxaan kuu daayeynaa tijaabooyin qaar:
Kaamirada fiidiyaha waxay na siineysaa awood aan wax ku duubno ilaa 4K oo ah 30 FPS inkasta oo imtixaanada aan dooranay nooca FullHD. Waxaan leenahay hagaajin midab leh oo xiiso leh, ma tilmaameyno lumis badan oo nuxurka ah marka iftiinku dhaco, laakiin xasilintu waa tan bartamaha. Sida kamaradda hore, waxaan haysannaa 16MP si aad u wanaagsan ayaa loo xalliyey waxayna si gaar ah natiijooyin wanaagsan uga helayaan gacanta barnaamijka.
Is-maamul iyo qaybo dheeri ah
Madaxbanaanida oo ah waali dhab ah tan Xiaomi Redmi Note 9 Pro, laga bilaabo cWaxay leedahay 5.020 mAh iyo lacag deg deg ah oo ah 30W kuwaas oo adabtarada shabakadooda ay ku jiraan xirmada. Waxaan ugu dambeyntii ku sharraxnay USB-C oo waxaan ku raaxeysanay kalfadhiyo in ka badan siddeed saacadood oo shaashad ah oo si fudud laba maalmood oo ah adeegsi baahsan iyada oo aan la jahwareerin. Waa run inaan seegi karno lacag la'aanta wireless-ka haddii aan la qabsannay, laakiin xagga batteriga wax yar ayaa laga weydiin karaa Redmi Note 9 Pro, oo ah meel ay ka muuqato oo aad u badan.
Ma iloobeyno astaamaha dheeraadka ah ee qalabka, Marka horeba, waxay leedahay NFC, tanina waxay maskaxda ka qaadi doontaa nacayb badan oo sumcad leh. Waxaad ku bixin kartaa iyo waxyaabo badan oo ka badan tan Redmi Note 9 Pro ee tijaabooyinkayagu si fiican isugu difaaceen qaybtaan.
Afarta SIM-ka ah
Afyare MicroSD ilaa 512 GB
Way adag tahay in la helo waxyaabo kale oo leh astaamahan qiyaastii 239 euro oo ah Redmi Note 9 Pro inta badan kharashka. Waxay la kulantaa fool ka fool Xiaomi Mi 10 Lite waxayna ka dhigeysaa tartan adag, gaar ahaan haddii aad sameyn kartid la'aan shaashadda OLED. Xaqiiqdii waxay buuxisaa inta badan shuruudaha ay iibsadayaasha dhexdhexaadintu raadinayaan, waxaadna ku heli kartaa qiimaha ugu fiican ee ku jira THIS LINK Amazon, laga bilaabo 239 euro.
Ku boodid tayo leh dhismaha Redmi
Madax-bannaanida wadnaha ee dhabta ah
Tilmaamo wanaagsan / saamiga qiimaha
Shaashadu waxay soo bandhigaysaa hooska qaar
Dhawaaqa ilaa heer ma gaadhayo
Waxaa la samayn karaa ugu yaraan laba dareemayaal
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Xiaomi Redmi Xusuusin 9 Pro, wanaag badan iyo cillado yar [Dib u eegis]
Dreame V9, faakiyuum lagu nadiifiyo oo leh qiimo aad u fiican oo lacag ah